Thaw na osisi: ihe na-akpata na nsonaazụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Agbaze okporo osisi
Kemgbe ọtụtụ iri afọ ugbu a, ha na-ekwu okwu gbazee na okporo osisi kpatara okpomoku zuru uwa. Ọnụọgụ okpomọkụ nke ụwa na-arị elu ruo n'ókè nke na ọ na-akpata ntiwapụ nke okpu polar na agbaze ha. Mgbanwe ihu igwe bụ otu n’ime nsonaazụ ozugbo nke mmụba na mmetụta griin haus. Data a gbazee bụ nnọọ egwu ebe ọ nwere ike na-hụrụ na usoro a na-osooso ọzọ na ndị ọzọ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara agbaze okporo osisi.
1 Kedu ihe agbaze nke ogwe osisi pụtara
2 Okpomoku Antarctica
3 Ice Antarctica rịrị elu na 2012
4 Mee ka okporo osisi na-esi na ya gbazee
Kedu ihe agbaze nke ogwe osisi pụtara
Mgbe anyị na-ekwu na enwere agbaze nke okporo osisi ya pụtara na mkpuchi ice nke okporo osisi na-agbaze. Ọnwụ nke ice nke mmanụ mmiri na-atụgharị na steeti mmiri na-akpata mmụba na ọkwa nke oke osimiri na oke osimiri. A ghaghi iburu n'uche na ntu oyi na igbaze bu ihe okike ebe obu na uwa nwere oge glaciation na okpomoku di iche iche. Agbanyeghị, ihe anyị na-atụ ụjọ ya abụghị na ọgbụgba dị na usoro okike nke ụwa anyị, mana a Usoro ngwa ngwa n'ihi omume na omume mmadụ.
Nsogbu bụ na agbaze nke ice na-eme na oke ọsọ karịa ka ọ dị na akụkọ ntolite niile nke ikuku glaciation na okpomoku nke ụwa anyị. Nke a bụ n'ihi nnukwu ọrụ mmadụ na-akpata ikuku gas na-ekpo ọkụ nke nwere ike ijigide okpomọkụ na ikuku. Ka okpomọkụ na-agbakọkwu, ọnụ ọgụgụ ka njọ na-ebili na na-akpata mgbaze okpu pola.
Ngbachapu a na-enye anyi okike ma ekwesiri ile ya anya dika nsogbu di oke egwu nye ndi mmadu na ndi ozo bi n’ime uwa a.
Mmiri gbanwere n'ime akpụrụ mmiri dị na Antarctica na-ekpo ọkụ karịa ogo ụwa. Anyị maara na ụwa dum na-ekpo ọkụ, mana ọ na-ekpo ọkụ n'ebe niile. Mpaghara Antarctic ma ọ bụ South osisi na-ekpo ọkụ karịa ngwa ngwa karịa ndị ọzọ n'ihi mgbasa nke eriri ebu. Ebu ebu ebu bu nfepu ikuku nke na - ebufe ndi mmadu ikuku site na Equator rue ogwe osisi. Ọ bụrụ na igwe ikuku ndị a na-eburu gas na-eme ka ikuku dị n'ime ha, ha na-amalite itinye uche na mpaghara nke okporo osisi. Nke a na - eme ka ikuku gas dị ukwuu dịrị na okporo osisi, n'agbanyeghị na ha na - esi ebe ahụ na - ebupụta anyị ozugbo.
Antarctica na-abawanye ogo okpomọkụ na ọkwa nke 0.17 degrees Celsius mgbe ndị ọzọ ọ na-eme nha nke ogo 0.1 kwa afọ. Agbanyeghị, anyị na - ahụ ọgbụgba izugbe gafee ụwa. N'ihi agbaze ice a, oke osimiri na-ebili gburugburu ụwa.
Enwere ụfọdụ data na-egosi mmụba nke ice na Antarctica. Ọ nwere ike ịdị ka ọ dịtụghị ekwe nghọta n’agbanyeghị na ihe gbazee zuru ebe niile na-ewere ọnọdụ. Na ngụkọta okwu, mmiri mmiri belatara ọ bụ ezie na ice Antarctic arịwanye elu. Nke a ka ọ na-eme mgbe niile kemgbe 1979 anyị ga-agbakwunye na Greenland na glaciers niile dị na mbara ala furu efu. Ya mere, enwere ike iji nkwenye zuru oke kwuo na ụwa na-agbapụ site na ice ice site na mmali na oke.
Ọnwụ a zuru ebe niile nke mkpuchi ala ice na-eme ka ihu ala gosipụta obere ike anyanwụ. A maara nke a dị ka albedo. Albedo bụ ikike nke ụwa iji nwee ike ịlaghachi akụkụ nke ihe sitere na radieshon nke anyanwụ na mbara igwe laghachi na mbara igwe. Eziokwu ahụ bụ na ụwa nwere obere albedo na-eme ka okpomoku zuru ụwa ọnụ dịkwuo njọ ma, ya mere, a na-enyeghachi usoro a azụ n'ụzọ ọsọ ọsọ. Ya mere, gbazee na-ewere ọnọdụ na ọsọ dị elu karị. Ekwesiri ighota na nke a na emetuta oke osimiri, na-eme ka o bilie ngwa ngwa ma di egwu.
N'agbanyeghị data niile ndị ọkà mmụta sayensị gosipụtara, e nwere ihe àmà doro anya na ọ bụghị naanị na okpomoku zuru ụwa ọnụ dị adị kamakwa ọ na-eme ngwa ngwa n'oge ndị a. Mediafọdụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-aga n’ihu ịkọwapụta ihe nsonaazụ mgbanwe ihu igwe ga-elekwasị anya n’akụkụ ndị ọzọ.
Ice Antarctica rịrị elu na 2012
Nke a dịtụ ka ihe na-emegiderịta onwe ya na enwere oke osimiri Antarctic. Ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na ihe na-akpata ihe ịtụnanya a bụ ikuku. E nwere usoro dị iche iche na ice mmiri nke nwere njikọ chiri anya na ikuku ifufe. Ọ bụ n'ihi na ike mgbanwe ikuku nke ifufe na-agbanwe bụ ihe na-ebu ice pụọ n'ụsọ oké osimiri. Ifufe ndị a nwere ike ime ka mmiri zoo. Achọpụtakwara na oghere ozone dị n'akụkụ ndịda ụwa na-emetụta ihe ịtụnanya a.
Imirikiti ice ice Antarctic ọbụna na ala. Ọ bụ nnukwu ndọtị nke na-ekpuchi elu ụwa ma gbasaa site n'oké osimiri gbaa gburugburu. Mpempe akwụkwọ ice Antarctic na-adalata na nkezi ọnụego 100 cubic kilomita kwa afọ.
Mee ka okporo osisi na-esi na ya gbazee
Ho nhwɛso ne Arctic. Otutu ebe a bu oke osimiri ebe Antarctica gbara ala. Nke a na-eme ka omume tupu ihu igwe dị iche. Ọ bụ ezie na ice mmiri na-ese n’elu mmiri na-agbaze, ọ nwere obere mmetụta na ịrị elu oke osimiri. Nke a abụghị ikpe banyere glaciers ugwu ma ọ bụ glaci glaci.
Ihe kachasị ọhụrụ na agbaze mkpanaka ndị ahụ na-egosi na Antarctica nwere otu nnukwu glaciers mara aha Tottenham nke na-agbaze n'ihi mmụba nke oke osimiri. Ha efuola nnukwu mmiri ice ma ihe a niile ga-emetụta ịrị elu nke oke osimiri. Ndị NASA ekwuputala na ọ dị anyị ka anyị eruola ebe ọnọdụ ịgbaze n'osisi adịghị agbanwe agbanwe.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere agbaze na okporo osisi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Agbaze okporo osisi